१० औँ साफ च्याम्पियनसिप : जित्ला त नेपालले उपाधि ? — Motivatenews.Com
१० औँ साफ च्याम्पियनसिप : जित्ला त नेपालले उपाधि ?
भदौ १७ काठमाडौँ– दशौं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता आगामी मंगलबारदेखि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा शुरु हुँदैछ ।
साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहँदै गर्दा दुई साताअघि नेपालको यु–२३ टोलीले इण्डोनेसियामा एशियाली खेलकूदमा सहभागिता जनायो । समूह डी मा रहेको नेपालले जापान, भियतनाम र पाकिस्तानसँग खेलेको थियो तर, तीनै खेलमा पराजय देख्नुपर्‍यो ।
भारतको यो निर्णय नेपालका लागि सुखद हुनसक्छ । दक्षिण एशियाली फुटबलमा नेपालले हराउन बाँकी कुनै टोली छैन । तर, एकै प्रतियोगितामा सबैलाई हराउन सकेको छैन । विगतमा पटक पटक नेपालका अगाडि बाधकको रुपमा भारत नै देखापर्‍यो । माल्द्विभ्सको टोलीमा पनि उसका भेट्रान स्टाइकर अली अस्फाक छैन र उहाँको अनुपस्थितिमा टोली मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर हुने ठानिएको छ । श्रीलंका र पाकिस्तान फिफा वरियतामै नेपालभन्दा तल छन् ।
– कुमार चौलागाई